Entertainment Archives - PARIJATMEDIA
“हट एण्ड बोल्ड,अ’ञ्जली अ’धिकारीलाई”(हेर्नुहाेस् १५ तस्बिरमा)
नेपालमा पछिल्लो समय छाेटाे समयमा निकै चर्चामा कमाएकी मोडल अञ्जली अधिकारी हुन् । उनकाे फिगर र सुन्दरताका कारण उनी प्रति दर्शक लाभिएका छन् । मोडल अञ्जलि अधिकारी गीत ‘बोल माया’ बाट सर्वाधिक चर्चामा आएकी थिइन्' ।" "छोटो समयमा उनले धेरै म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको गीत ‘गलबन्दी’ बाट उनको लुक्सको बारेमा सर्वत्र चर्चा भएको थियो '।" गीतमा लजाउँदै दिएको उनको प्रस्तुति निकै राम्रो रहेको थियो । गलबन्दी पछि अञ्जली अभिनीत ‘कल्ले दुइदेला’ बोलको रत्यौली गीत युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको थियाे' । "उक्त गीतले सार्वजनिक भएको केही दिनमै लोकप्रियता कमाउँदै गएको छ । त्यस गीत चर्चामा आए संगै निकै भाइरल भैइरहेको अञ्जली अधिकारी बहराइनमा खिचिएका तस्बिर यति बेला चर्चामा अाइरहेका हुन्छन् '।" हेर्नुहाेस् उनका केही तस्विरहरूः
छोरी भन्दा आमा तरुनी ! हेर्नुहोस यस्ता ५ फोटोफिचर सहित
एजेन्सी । नेपाल लगायत भारतमा विभिन्न समयमा विभिन्न खबरहरुले प्राय सबै संचार माध्यममा छाईरहेको हुन्छन् । ति मध्ये अहीलेको ख़बर रहेको छ अभिनेत्री रवीना टन्डनको, अभिनेत्री रवीना टन्डन आजपनि त्यति नै सुन्दर देखिन्छिन् जति उनी ९० को दशकमा देखिन्थिन् । रवीना फिल्मी क्षेत्रबाट टाढा भएपनि फ्यानहरुको ध्यान खिच्न अझैपनि माहिर छिन् । अवार्ड फंक्शन होस् या एयरपोर्ट उनको लुक सँधै स्टाइलिश हुन्छ । हालसालै रवीना आफ्नी छोरी राशासँग शैलुनबाहिर भेटिएकी छन् । जसमा दुवैको सुन्दरताले सामाजिक सञ्जाल तताएको छ ।
सन्नी लियोनी कसरी बनिन् पो’र्नस्टार ? [९ तस्बिर]
भारतीय मूलुकी क्यानेडियन अभिनेत्री सन्नी लियोनी हुन् । भारतमा अहिले उनको ठूलो ‘चार्म’ छ । सन् २०१४ मा उनी भारतबाट गुगलमा सबैभन्दा बढी खोजिएको व्यक्तिमा दरिएकी थिइन् । ‘सानी छदाँ मेरो चाहना अर्कै थियो । म नर्स अथवा डाक्टर बन्न चाहन्थेँ । पो र्न स्टार बन्छु भनेर चिताएकी पनि थिइनँ,’ भारतीयहरूले गुगलमा उनलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भन्दा बढी खोजेका थिए तर, उनी सानी छदाँ पो र्न स्टार बन्छु भन्ने कल्पनासमेत गर्दिनथिन् । ‘सानी छदाँ मेरो चाहना अर्कै थियो । म नर्स अथवा डाक्टर बन्न चाहन्थेँ । पो र्न स्टार बन्छु भनेर चिताएकी पनि थिइनँ,’ सन्नी भन्छिन्, ‘डाक्टर र नर्सले बिरा मीको सेवा गरेको देख्दा मलाई पनि त्यसै गर्न मन लाग्थ्यो ।’ एक दिन एकजना साथीले सन्नीलाई भनिन्, ‘तिम्रो लुक यति राम्रो छ, ज्यान पनि खाइलाग्दो छ । तिमी मोडलिङ किन गर्दिनौ ?’ किशोरावयमै उनले क्यालिफोर्नियामा
“नेपाली चलचित्रका १० सुन्दर नायिका”(फाेटाे फिचर)
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको आगमन भएकाे छ । त्यो हरेक क्षेत्रमा अपरिहार्य पनि छ । फेरी नयाँ पुस्ताको प्रबेश नहुनु भनेको त्यो क्षेत्रको एक प्रकारको अन्त्य हुनु पनि हो । त्यसतै नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पनि नयाँ अनुहारको आगमन हुन्छ र एक प्रकारको दबदवा पनि रहन्छ '। पछिल्लो समय नेपाली सिने जगतमा प्रबेश गरेका नयाँ अनुहार केहि परिवारका कारण र केहि संघर्ष गरेर आफूलाई स्थापिन बनाउन सफल बनेका छन् । जती धेरै रिजर्भ बस्यो, उती नै दर्शकको माया पाईन्छ भन्ने कलाकारहरुको वुझाई छ । त्यो केहि हदसम्म ठिकै पनि हो' । तर रिजर्भ बस्दा पनि सुन्दरताकै कारण पनि केहि अभिनेत्रीहरु चर्चामा आउँने गरेका छन् । आज हामी पछिल्लो समयका १० सुन्दर नायिकाहरुलाई प्रस्तुत गर्दैछौ । फोटो हेर्नुहाेस्ः १. आना शर्मा २. आचल शर्मा ३. अदिति बुढाथोकी ४. वर्षा राउत ५. वर्षा शिवाकोटी
नायिकालाई नै उछिन्दै हिट एण्ड हट आश्मा विश्वकर्मा, हेर्नुहाेस् १३ तस्विर
लामो समय देखि आफ्नो प्रस्तुति मार्फत दर्शकलाई मनोरञ्जन दिँदै आएकी आश्मालाई ग्रुपमा सबैले माया गर्छन् । उनको एउटा भिडियो डामेटोको सिटो मात्र ५९ सेकेण्डको छ । पत्याउनु हुन्छ । कसैकोपनि १ मिनेको मात्र डान्स गरेको भिडियो छोटो समयमा नै ५ करोड पटक भन्दा बढी हेरिन्छ ? नेपालका कुनैपनि अभिनेत्रीको त्यस्तो छैन । तर युट्युबमा बेजोड डान्सकै कारण लोकप्रिय बनेका नेपाली डान्स ग्रुप ‘कार्टुन्ज क्रु’की एक मात्र महिला मेम्बर आश्मा विश्वकर्मा हुन् । त्यही भिडियो अपलोड गरिएको ४ महिना र केही दिन मात्र हुँदै छ तर ५ करोड २० लाख पटक भन्दा बढि हेरिएको छ । यही गतिमा अघि बढे सायद अब यही भिडियो नेपालमा सबैभन्दा धेरैपटक हेरिएको भिडियोको रेकर्डमा रहन सक्ला । सरोज अधिकारी लगायतका सबै साथीहरूले उनलाई कार्टुन्ज क्रुकी रानी भएको बताउँछन् । आश्माले आफ्नो डान्स मार्फत सबै नेपालीको मनमा बस्न सफल भएकी छिन्। उनको
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर (फोटो फिचर)
काठमाडौं– विश्वव्यापी कोरोना महामारीका बेला अहिले सबै फुर्सदिला बनेका छन् । सबै घरभित्रै सीमित हुँदा समय बिताउन समेत मुस्किल परेको अवस्था छ । यो अवस्थामा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका नायक नायिकाहरु पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय बनेका छन् । सदाबहार नायिका करिश्मा मानन्धर अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय बनेकी छिन् । उनी दैनिक नयाँ नयाँ तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गर्दै आएकी हुन्छिन् । कहिले घरको छतमा मोडलिङ गरेका त कहिले फुलबारीका । उनले तस्वीरसँगै कोरोना भाइरसको त्रासमा बसेकाहरुलाई सकारात्मक सन्देश समेत प्रवाह गर्दै आएकी छिन् ।उनले सामाजिक सञ्जालमा राखेका केही तस्वीर यस्ता छन्-
नेपालमा कतिवटा जिल्ला र प्रदेश छन् ? नेपालमा ७७ जिल्ला, १४ अञ्जल र ७ प्रदेश छन् । तर, नेपाली फिल्मकी अभिनेत्री पूजा शर्माले नेपालमा ७७ जिल्लाबाट १४ जिल्लामा झारिदिएकी छन् । उनले एक अन्तर्वार्तामा नेपालको जिल्लाको संख्याबारे दिएको गलत जवाफको भिडियो क्लिप केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैरहेको छ । पूजाले तीन महिनाअघि प्राइभ टिभीमा दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालमा १४ जिल्ला रहेको बताएकी थिइन् । यो अन्तर्वार्ता यूट्युबबाट हटाइए पनि उनले नेपालको जिल्लाबारे दिएको जवाफको भिडियो अहिले छ्यापछ्याप्ती भएको छ । भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि उनी ट्रोलको शि कार भएकी छन् । नेपालमा जन्मिएर नेपालमा कति जिल्ला छन् भन्ने ज्ञान नहुने अभिनेत्रीले आफूलाई नेपाली भन्न नसुहाउने भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उनको आलोचना पनि गरिरहेका छन् । यसबीच, अभिनेत्री सुष्मा कार्कीले पूजाको कटाक्ष गरेकी छन्
“रवि लामिछानेसँग डेट जान चाहाने कुशुमको सुन्दरता”(फोटो फिचर)
फिल्म ‘मिस्टर नेपाली’की अभिनेत्री हुन् कुशुम राउत ।उक्त फिल्मबाट कुशुमले अभिनयमा डेब्यु गरेकी हुन् '। देशप्रेम र प्रेमकथामा निर्माण भएको फिल्म उनी भने अभिनेता साहिल श्रेष्ठको जोडी बनेकी छन् '। अभिनेता सरोज खनालले सञ्चालनमा ल्याएको एकेडेमी माला आर्टमा अभिनय प्रशिक्षण लिइरहेकी कुशुम नृत्य र द्वन्द्वको प्रशिक्षणसहित अभिनयमा होमिएकी हुन् '। पुतलीसडक धोवीधार निवासी कुशुमले कलाकारितमा शिखर चुम्ने सपना देखेकी छन् । कुशुम सानैदेखिको रहर पूरा गर्न कलाकारितामा होमिएकी हुन् '। यो क्षेत्रमा जस्तै उतारचढाप आए पनि नभाग्ने सोचमा रहेकी कुशुमले एक अनलाइसँगको अन्तवार्तामा पत्रकार रवि लामिछानेसँग डेट जान चाहाने बताएपछि उनको निकै चर्चा भएको थियो '। उनले उक्त अन्तर्वातामा भनेकी थिइन्- डेट रवि लामिछानेसँग जान चाहन्छु । उहाँसँग भेटेर कफी डेट गर्दै गफ गर्ने इच्छा छ । उहाँको बोल्ने शैली मनप